Omunye izitsha ozithandayo we emadilini merry, ikakhulukazi ngesikhathi ezi iziphelo zamacala omzi, ku epikinikini - lokhu Yiqiniso, izoso. Ngiyakuthanda konke. Lokhu dish bangahlangana inkampani ezinhle, futhi iseduze kanye nomndeni kanye nabangane kakhulu. Nokho, awusebenzi ngaso sonke isikhathi nethuba ukuya ku imvelo. Futhi uma sizibuza ukuthi ukupheka kebabs kuhhavini, okungukuthi, zokupheka okuyinto wathola ezinhle kakhulu. Zikhona izindlela eziningi kulungiselelwa lokhu dish.
Uma ukhethe kadokotela "Kebab kuhhavini", kuyoba kubalulekile ngokucacile bagcine zonke izimo - futhi zonke uthola.
Ngakho, isimo main - kuba Yebo inyama. Kebabs okulungiselelwe kusukela inyama of izinhlobo ezahlukene. Nokho kungcono ukupheka it kuhhavini kufanelekile yengulube abasha noma imvu. Fit inyama yenkonyana, ngokungafani yenkomo. Yiqiniso, kuyinto efiselekayo ukuthi inyama kwaba fresh.
Ngaphezu kwalokho namanje kubaluleke kakhulu ukuba obuncane yengulube fresh futhi nomsila ononile semvu.
Isimo wesithathu kuyinto kebab inyama ezinhle ngaphambi ukusika edingekayo ngempela kucace kusukela emithanjeni, imisipha, amafilimu. Inyama ngokwalo kufanele uthathe yizicucu amancane nenkundla ziyadliwa, kangangokuthi cishe ezifanayo ngosayizi. Ngisho ezincane kuyadingeka ukusika amafutha. Kufanele kube izicucu cishe amaningi njengoba kukhona inyama.
Oqoshiwe ubhekeni kanye ukubeka inyama endishini enkulu futhi nquma anyanisi ukuze: uhhafu ikhilogremu inyama awe omunye onion. Khona-ke, qala zokuyithambisa, kanye izoso bendabuko. Inyama kufanele kube usawoti kancane pepper kanye upelepele obomvu, engeza ingcosana emhlabathini cumin bese ingcosana imbewu nepepper of coriander, a turmeric kancane, kancane ufafaza inyama uviniga ababuthakathaka ukunikeza uhlobo kebab ukunambitheka ke ngawakhamela kalamula. Khona-ke inyama uhlanganise kahle, amboze nge lid endishini amanzi okugqumisa ke okungenani ihora ngalesi sikhathi iyazifudumeza kuhhavini.
Ngaleso sikhathi, lapho kuhovini evuthayo, futhi inyama kulolo ketshezi, uqhubekele ukukhonza ukudla izoso oluzayo. Okokuqala kubalulekile ukulungiselela umnsalo, okuyinto uthathe izindandatho nomzimba omncane follicle amaningi agezwa ngamanzi abandayo izikhathi eziningana, engeza imifino oqoshiwe, ingcosana pepper kanye esincane kalamula noma uviniga ababuthakathaka. Kulolo ketshezi inyama uhlomo kufanele ahlukaniswe ku eside cishe 40 cm, ngakho zihlobana kuhhavini.
Isimo sesine, uma usebenzisa iresiphi "Kebab kuhhavini": iqatha lenyama ku uhlomo kufanele alternated nge nocezu ubhekeni, nakanjani kufanele baqede stringing ucezu ubhekeni. Awubalulekile izingcezu kakhulu uvalwe ahlukaniswe.
Uma ungazi indlela Fry skewers kuhhavini, kungcono ukukwenza uzimele, okuyinto bufakwe esikhundleni pan, futhi uvumelane skewers. Nokho, ngaphambi kokuba ufake skewers kule Uhlaka, kubalulekile ukulungiselela pan, okuzokwenziwa etholakala ngqo ngaphansi izoso. pair of ucwecwe amashidi kufanele kube okuphephile, usigcwalise, wafaka kuso kuso amaqatha ambalwa ubhekeni thinly lisikiwe ngendlela engahleliwe. Kuyinto - namanje isimo esisodwa ezibalulekile, uma usebenzisa iresiphi "Kebab kuhhavini."
Kumele ufake kebabs phezu hlupha ukuze kukhona ibanga, futhi ukufaka konke osuke usushisa kakade 250 degree kuhhavini phakathi kwazo.
Phakathi yokuwugazinga on skewers ne ucwecwe ukuvuza juice kuqala, bese drips amafutha. Kebabs phezulu ngeke uye wakwenza ngokuzimisela ukuba kubhakwa, futhi ngaphansi kwaleli baking asebenzayo kuyoba kancane ngemuva. Kancane kancane ubhekeni wabeka phezu ucwecwe kanye ukusakaza kanye ke, ngeke kuvimbele dymlenie amafutha econsa izoso. Yilokho kudingeka, futhi ngokushesha nje phezulu kebabs zazolotitsya, bayoba ukuze ujike ohlangothini kuphekeke phansi bese ulinda isikhathi lapho ubhekeni phezu ucwecwe uyoveza intuthu. Ingabe-ke pretty masinyane. Njengoba nje amanoni uyoveza intuthu, ifreyimu izoso, futhi bhaka ne ucwecwe kufanele kususwe kuhovini.
Uma uke wasebenzisa iresiphi lesifanele "Kebab kuhhavini", ungahambisa isidlo esiphelele itafula, wafafaza anyanisi yakhe pre-okulungiselelwe.
Inhlama for ophaya kuhhavini
Amazing iwundlu sikadali (amazambane, imifino, asithena)
Star Ihhotela Euphoria-Palm Beach: Turkey elinde izivakashi
Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni Green: Yiziphi izici?